शिक्षक सरुवा बदर हुदैन् – अध्यक्ष राई - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
शिक्षक सरुवा बदर हुदैन् – अध्यक्ष राई
सुमेरु संबाददाता १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १६:२७
सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवाको विषयमा उपाध्यक्ष सहित वडाअध्यक्षहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत बैशाख २५ गते गरिएको शिक्षक सरुवा विद्यालयको आवश्यकता, विषयगत दक्षता, विद्यार्थी संख्या र शिक्षकको सहुलियतलाई ध्यानमा नराखि शिक्षा ऐन र नियमावली विपरित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उपाध्यक्ष सविता राई, वडा अध्यक्षहरु नातिकाजी गुरुङ, घनराज सुनुवार, भूपालध्वज राई र फुर्तिमान तामाङले विज्ञप्ती जारी गर्दै शिक्षक सरुवाको निर्णय फिर्ता लिन र शैक्षिक वातावरण नखल्बलाउन आग्रह गरेका छन् । नामपरिर्वतनको निर्णयमा विवादमा तानिएको गाउँपालिका शिक्षक सरुवा सन्दर्भमा पनि विवादित बनेको छ । यहि विषयमा थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
तपाई फेरि, एक पटक विवादित बन्नु भयो नी ?
तपाईको प्रश्न नै बाहेस भयो भन्ने लाग्छ । जसरी तपाईले विवादमा आउनुभयो भन्ने शब्दमा मेरो असहमती छ ।
मैले भनेको होईन, तपाईकै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षक सरुवा गलत भनेर विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
स्थानीय तह सरकार हो की हैन् । स्थानीय सरकार संघीय या प्रदेश सरकारको डिभिजन होईन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा केहि विवाद जस्तो देखिएको मात्र हो, त्यो पनि गाठ्ठी कुरा नबुझेर । मलाई कुनै जानकारी पनि आएको छैन् । कार्यपालिकाको वैठकमा कुरा पनि उठेको छैन् । हामीले गरेको काम सतप्रतिशत संवैधानिक छ । विशेषगरि ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाम्रो गाउँपालिकामा मिलेर काम गरिरहेको देखेर कुनै एक राजनितिक दलले भाड्ने कोशिस गरिएको मात्र हो ।
तपाईले निषेध त गर्नुभएछ नी ?
कसरी निषेध भयो ? हामीले कार्यदल बनाएर कार्यदलको सिफारिसमा शिक्षक सरुवा गरेका छौ । गाउँ शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सरुवा गरिएको प्रष्ट्र छ ।
आस्था र विचारको आधारमा सरुवा गरियो भन्ने आरोप छ नी त ?
आस्थाको आधारमा विवाद कसरी भयो । दुई बर्ष सम्म कुनै वडाअध्यक्षले आस्थाकै आधारमा बजेट कम पाए भनेर गुनासो गरेको था छ ? अहिलेसम्म कुनैपनि कुरामा विचार र आस्था हेरिएको छैन् ।
हेर्नुस्, नपढाएर खान पर्ने मानसिकता विद्यमान छ । शैक्षिक वेहाल छ । यो जिम्मेवारी कस्ले लिने ? हिजो बल बहादुर केसी शक्तिमा आउदा जिल्लान्तर सरुवा गर्ने, एउटै शिक्षक बर्षमा ७ पटक सम्म सरुवा हुनुपर्ने नजिर त हामीसंगै छ नी । वितेका दुई बर्षको अवधिमा विचार र आस्थाको भरमा कुनैपनि शिक्षकलाई सरुवा गरेको प्रमाण ल्याउनुस्, तपाईलाई पुरस्कृत गर्छु । गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधार बर्षको रुपमा काम गरिरहेको छ ।
अन्दाधुन्द शिक्षक सरुवा गरेर शैक्षिक सुधार हुन्छ ?
कसरी अन्दाधुन्द ? कसरी अन्दाधुन्द ?
उपाध्यक्ष लगायत वडाअध्यक्षले त्यसै त विरोध गरेनन् ?
कार्यदलका वैठकमा ती व्यक्तिहरु छन् । वैठकमा आएर छलफल गर्न परेन् । निर्णय मन नपरे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अधिकार थिएन ? नियतवस कोही आउनुभएको थिएन भने चासो विषय हुदैन् । घर डढाएर घरको मुल्य खरानीबाट उठाउने सोच भएकालाई मेरो भन्नु केही छैन् । विचारकै आधारमा व्यवहार गर्ने हो भने, १७ जनाको कार्यपालिकामा १२ जना नेकपा निकट जनप्रतिनिधिहरु छन् । तर हामीले अहिलेसम्म व्यवहारमा विभिन्नता दर्शाएका छैनौ । पेल्नै पर्ने अवस्था आएर पेलिन्छ । तर स्थानीय सरकारमा विपक्षि बेन्च हुदैन भनेर वकालत गर्ने एकल व्यक्ति हूँ ।
भनेपछि तपाईलाई दुई तिहाइको दम्भ बढ्यो, हैन त ?
शुरु कल्ले ग¥यो ? साथीहरु भ्रममा हुनुहुन्छ की ? म चाहन्छु, अझै पनि विकासका क्रियाकलापमा साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने हो । दुई बर्षसम्म विना विवाद काम ग¥र्यौ ।
शिक्षक सरुवाको निर्णय करेक्सन गर्नुहुन्छ ?
करेक्सन किन गर्ने ?
कार्यपालिकाकै सदस्यहरुले आवाज उठाउनुभएको छ ?
आवाज उठाउने माध्यम विज्ञप्ती हो ? विधि छैन्, निति छैन् ।
वैठकमा उठेका आवाज सुन्नुभएन होला नी त ?
मलाई भन्नुस्, कस्ले भन्यो की, वैठकमा अध्यक्षज्यू यो विषयमा मेरो फरक मत छ या छलफल गर्न चाहन्छु भनेर । वैठकमा उपस्थित भएर नोट अफ डिसेन्ट किन लेखिएन । या अध्यक्ष भएको नाताले निर्णयबारे छलफल गर्नका लागि शिक्षा समिति या कार्यापालिकाको वैठक डाक्नुस् भनेर मलाई किन भनिएन ।
शिक्षकहरु असन्तुष्ट छन् ?
असन्तुष्ट को छ ? असन्तुष्ट को छ ? हावा कुरा गर्नहुन्छ ? ६७ जना शिक्षक सरुवा गरेकोमा लगभग १० जना मात्र राजिनामा दिदैछन्, भोली । उनीहरु कसैले उकासेको भरमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ । अरु सबै तोकिएको विद्यालयमा गएर शिक्षण शुरु गरिसक्नुभएको छ । निर्णय फिर्ता लिने हैन की उच्चारण समेत हुदैन् । ‘अहिलेको शिक्षक सरुवा २० प्रतिशत मात्र हो, ८० प्रतिशत सरुवा आगामी भदौमा गछौ ।’
हेडमास्टर नियुक्तीको विषयमा के हुदैछ ?
पाठ्यक्रम तयार गरिसकेका छौ । अध्ययनको समय भएन भन्ने हिसावले गुनासो आएकाले आगामी असारको ९ गते छनौट परिक्षा लिदैछौ । शिक्षाविदु डा. विद्यानाथ कोईरालाको संयोजकत्वमा पाठ्क्रम बनाएका हौ । मापदण्ड बनाएर विवादरहित र पक्षपातरहित प्रध्यानाध्यापक नियुक्त गर्छौ । कसैले रोक्न सक्दैन् ।
हिमाल एफ.एम.को साप्ताहिक कार्यक्रम सवाल–जवाफका लागि भानुभक्त निरौलाले गर्नुभएको कुराकानीको आधारमा